मोटी युवतीसँग विवाह गर्नुका अचम्मका फाईदै फाईदा ! – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीमोटी युवतीसँग विवाह गर्नुका अचम्मका फाईदै फाईदा !
February 1, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6505
सामान्यतया स्लिम केटीहरु आर्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर एक अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिकांश पुरुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् ।
यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक समयमा साथ दिन्छन् सजिलैं छाडेर जाँदैनन् ।
नेशनल अटोनान्मस यूनिवर्सिटी अफ मेक्सिकोंले गरेको अध्यनमा स्लिम केटीहरुको दाँजोमा मोटी केटीहरुसँग सम्बन्धमा रहेका पुरुषहरु धेरै खुःशी हुन्छन् । अध्यनमा भनिएको छ कि स्लिम केटीहरुको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा धेरै खुशी रहन सक्छ ।
एउटा सत्य के हो भने जो मानिस मा-नसिक रुपमा ठिक हुँदैन उ नै धेरै दुब्लो पातलो हुन्छ । मोटी महिलाहरु कुनै पनि कुरा मनमा राखेर षडयन्त्र गर्ने खालका हुँदैनन ।
उनीहरु मनमा भएको कुरालाई तत्काल भन्छन तर पछि सम्म राखेर बदला लिने स्वभावका हुँदैनन् । यसरी दाम्पत्य जीवन खुःशी र सफल हुन्छ उनिहरुले सन्तानलाई पनि यसरी नैं प्रेम गर्छन अनी परिवारलाई पनि ।
November 26, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 11979
सपनामा के के देख्दा कस्तो असर ?
December 23, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 3047
काठमाडौं । सपना देख्ने क्रममा यस्ता पनि देख्छौ जुन स्थान र दुश्य जीवनमा नै कहिल्यै देखेका हुँदैनौ । यसैकारण सपनामा आधारित भएर जीवनमा घट्ने घटनाको अड्कल गर्न सक्छौ । वस्तुसँग सम्बन्धित स्थानको सपना देखेमा के
November 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10773